ပြဇာတ်ရုံ AV နည်းပညာရှင် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » ပြဇာတ်ရုံ AV စနစ် Technician အ
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: ပြဇာတ်ရုံ AV စနစ် Technician အ
ရာထူး: ပြဇာတ်ရုံ AV စနစ် Technician အ
ကုမ္ပဏီ: ကို TED
ပြဇာတ်ရုံ AV စနစ် Technician အ
TED ကိုကမ္ဘာ့ဦးဆောင်တွေးခေါ်ရှင်နှင့်အကငျြ့ကနေမှုတ်သွင်းခံဆွေးနွေးပွဲတွေ featuring တစ်ဦးပြင်းထန်စွာကောင်းချီး, ဆုရညီလာခံနှင့်က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ 2006 ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲထက် ပို. 10 ဘီလီယံအထိအဆကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့လက်ရှိရှာကြသည် ပြဇာတ်ရုံ & စတူဒီယို A / V ကို Technician အ တိုက်ရိုက်လွှ Multi-ကင်မရာ Soho အတွက်ကို TED ဌာနချုပ်မှာတည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းနေရာအတွက်ရိုက်။
ဤသည်နည်းပညာရှင်ပြဇာတ်ရုံအာကာသအတွင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ထုတ်လုပ်မယ့်ထုတ်လုပ်မှုအသင်းလာရောက်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မည် - ပေါ် post သောလက်မှတ်ကို TED ဆွေးနွေးပွဲကနေ TED.com ပြည်တွင်းရေးနှင့်အများပြည်သူ-facing ဖြစ်ရပ်များအမျိုးမျိုးရန်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးနှင့်အဓိကကဗီဒီယိုအင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, ပေါင်းအပါအဝင်အားလုံးစတူဒီယိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်အလုပ်လုပ်အသိပညာရှာကြသည်; ကင်မရာကိုစစ်ဆင်ရေးမှာဂရပ်ဖစ်, အလင်းရောင်, switching နှင့်ပရိုဂျက်တာစစ်ဆင်ရေး, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-stream ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်မျိုးစုံအရင်းအမြစ်အသံဖမ်းနှင့်အတူ Image စီမံကိန်းများ။ ဤသည်မှာ AV စနစ် Technician အထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ဒုက္ခထိန်းချုပ်မှုခန်းထဲမှာရိုက်ကူးအဖြစ်ပြဇာတ်ရုံတစ်လျှောက်လုံး, အ patch အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ဟာ5ကင်မရာ feeds, ဂရပ်ဖစ် Feeds နဲ့အသံသတင်းရပ်ကွက်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
သည်အခြားစီမံကိန်းများအတွက်အနည်းဆုံးအဝေးမှ operated ကင်မရာများ အသုံးပြု. staffed လိမ့်မည်နေစဉ်အချို့ကစီမံကိန်းများကိုတစ်ထုတ်လုပ်မှုအမှုထမ်းကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် AV စနစ် Technician အမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ AV စနစ် Technician အပုပြဇာတ်ရုံဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူမှသတင်းပေးပို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းနေရာနှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်5+ နှစ်ပေါင်း
ခေတ်သစ်ထိန်းချုပ်မှုခန်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံထုတ်လုပ်မှု, ကင်မရာများနှင့်ထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုနည်းပညာ up-to-date ဖြစ်အောင်အသိပညာ။
video conferencing နှင့်တိုက်ရိုက်လွှနည်းပညာလည်ပတ်နိုင်စွမ်း။
အသံရောနှော, မိုက်ခရိုဖုန်း, စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် patch ၏တစ်ဦးကအစိုင်အခဲနားလည်မှု။
အငြိမ့် router များ, patch ကို bays နှင့် signal ကိုစီးဆင်းမှုလည်ပတ်နိုင်ပြီးမှတ်တမ်းများနှင့် Image အတွက်ချိန်ကိုက်မှုကိစ္စများနဲ့တူပြဿနာဖြေရှင်းရန်နိုင်ပါတယ်။
အခြေခံပညာဗီဒီယိုနှင့်ပြဇာတ်အလင်းရောင်၏နားလည်မှု, DMX ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အရောင်အပူချိန်, အဆောက်အဦးများနှင့်အပါအဝင်ဖြိုဖျက်: ရွေ့လျားနေသည့်အခြေခံမသမာမှုများနှငဖျက်သိမ်းရေးကျားကန်ခြင်းနှင့်တိုက်ခန်း, ပိုက်နှင့် drape နှင့်ထုံးစံကျားကန်အပါအဝင်ဒြပ်စင်ထားကြ၏။
ကိရိယာများ, လှေကား, ခြေလှမ်းများ, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုတိပ်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကွင်းဆက်, ခါးပန်းနှင့်သဲအိတ်အသုံးပြုမှုအပါအဝင်ပြဇာတ်ရုံ, စတူဒီယိုနှင့်အလုပ်ခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၏အားကြီးသောနားလည်မှု။
ကို TED ဗီဒီယိုကိုအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်နှင့်အတူ aligned ပြဇာတ်ရုံစောင့်ရှောက်ဖို့ကို TED ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုန်ထမ်းများနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်, ပြဇာတ်ရုံစွမ်းရည်ထုတ်တည်ဆောက်သို့မဟုတ်အချိန်ကျော်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပြောင်းလဲပိုကြီးတဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစီမံကိန်းများအပေါ်ဦးဆောင်ယူနိုင်စွမ်း။
ကျွမ်းကျင်မှုဖြေရှင်းရေးခိုင်မာတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြဿနာအတူ Resource ။
တည်ငြိမ်ပြီးဖိအားအောက်မှာချိုသော။ အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် troubleshoot နိုင်စွမ်း။
လက်နှင့်အာဏာ tools များနှင့်အတူအလုပ်အတွေ့အကြုံ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေ set စိတ်ကို - ကြိုတင်ဖြစ်ရပ်များမှအလားအလာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမျှော်လင့်, အဆောက်အဦ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်ရပ်ကိုစတင်ပါ။
TED ကိုတစ်ဦးတူညီသောအခွင့်အရေး Equal Opportunity အလုပ်ရှင်သည်နှင့်ကျွန်တော်မတူကွဲပြားမှုကိုတန်ဖိုးထား။ ကျနော်တို့လျှောက်ထားရန်မဆိုနောက်ခံ၏လျှောက်ထားတိုက်တွန်းပါသည်။ ဤသည်နယူးယောက်စီးတီးတွင်အခြေစိုက်နေတဲ့အချိန်ပြည့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အတှေ့အကွုံညီလစာ။ ချက်ချင်းငှားရမ်း။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-03-28
ယခင်: ဖြေရှင်းချက်အင်ဂျင်နီယာချုပ် (မီဒီယာ Technology)
နောက်တစ်ခု: interactive Media ကအင်ဂျင်နီယာချုပ်